Iingcebiso ezili-16 kunye namacebo okuphucula ubomi bebhetri kumthala we-s7 kunye ne-s7
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iingcebiso ezili-16 kunye namacebo okuphucula ubomi bebhetri kwi-Galaxy S7 kunye ne-S7
Ukuba ucinga ngayo, thina & apos sigqibe ukubethelela into esilingini ngee-smartphones-ubuncinci ngendlela. Uninzi lwezixhobo zekhompyutha namhlanje kudala zawela ubuncinci bezococeko obufunekayo kumava omsebenzisi onesidima, kwaye ubuchwepheshe obukhethekileyo ngaphambili ngoku buyafumaneka ebantwini. Ke sinayo yonke iilekese zamehlo esizifunayo ngemiboniso yee-smartphones zethu, sinazo zonke izihlunu eziqhubekekayo ezifunekayo ukugcina izinto zihamba ngokugudileyo, kwaye sineekhamera ezifanelekileyo ngokwaneleyo ukuba zinokubamba nawuphi na umzuzu ngaphandle kwengxaki ezininzi. Kodwa kukho isiqwenga esinye setekhnoloji esele sishiyekile emva kwezinye, kwaye okoko nje sinokukhumbula: ibhetri.
Ukudala amandla kunye nokugcina yinto enzima ukuyenza. Kuya kufuneka uyazi-jonga nje kwinyanga ephelileyo kunye neebhili zerhasi, kwaye ujonge iinkuni ezifunekayo ukugcina umlilo uvutha. Ukuphuculwa, ewe, kwenziwa njengoko siqhubeka. Iibhetri ezikwii-smartphones zanamhlanje zingcono kunezo kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Kwaye kwiminyaka emihlanu, baya kuthi ngcono babengcono. Izinto ezahlukeneyo ngaphakathi kwe-smartphone yakho ziyawonga ngakumbi amandla. Kwaye okwangoku, sifuna ngaphezulu.
Ewe kunjalo, ukuba kukho into enye ebonakala ngathi iyanyamezeleka kumthetho wokunciphisa ukubuya kwindawo yokujonga yabasebenzisi, iiapos kufuneka zibhetri. Okukhona sinayo, ngcono, kwaye ngokuqinisekileyo siyafuna okuninzi. Imithwalo engaphezulu! Kwaye kukho iindlela zokufumana ukusebenza okungcono ngaphandle kwejusi ngaphakathi kwefowuni ipokotho yakho, ngakumbi ukuba & apos s Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7.
Siqulunqwe ngezantsi kwenani lamaqhinga kunye neengcebiso zokuphucula ubomi bebhetri kwiiSamsung & apos; zamva nje, kwaye zisusela ekucaceni kwazo zonke iindlela ezintsokothileyo kunye nokuchitha ixesha. Akukho mntu ulindele ukuba ubenzele bonke. Endaweni yoko, zama kwaye uzilungelelanise neemfuno zakho kunye nezinto ozikhethayo ukuze ufumane okungcono kwibhetri yakho ngaphandle kokuncama ukusebenza okhathalayo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ekugqibeleni uphela ngobomi obubhetele bebhetri, kodwa kuphela ngenxa yeempawu ezibalulekileyo, yeyiphi eyona nto uyifunayo?
Iingcebiso kunye namacebo okuphucula ubomi bebhetri kwi-Galaxy S7 kunye ne-S7
I-pixel kaGoogle iyixabisile
IVerizon (yabo bonke abathengisi) ineGoogle & apos yinyani yePixel Buds engenazingcingo iyathengiswa ngexabiso labo eliphantsi okwangoku
Iapile iWatch Watch & apos; into yokufumanisa ukuwa kusilele hilarious kumabonwakude wesizwe
I-Galaxy S20 iya kufumana i-Android 11 kuqala, njengoko i-Samsung izibophelela kwiminyaka emi-3 yokuhlaziywa kwezi fowuni
I-Galaxy S9, i-S9 + ayizukuwina kwaye ihlawuliswe ngokukhawuleza kuneGPS S8 kunye ne-S8 +, kubonakala ngathi
I-Galaxy S8 kunye ne-S8 + ngamanye amaxesha ziyakukhumbuza ukuba ucoce iilensi zekhamera ngokukhangela ngokucacileyo
IJava Fumana isiKhombisi esiSebenzayo ngoku